सम्बन्ध टुट्नुका मुख्य कारणहरु
मंगलबार, २१ जेष्ठ, २०७६
सम्बन्ध बनाउन निकै सजिलो हुन्छ । तर, यसलाई जोगाइ राख्न र टिकाइ राख्न निकै कठिन हुन्छ । केही सम्बन्धहरु निकै लामो समयसम्म पनि चल्ने गर्छन् । तर, केही सम्बन्धहरु सुरुवात भएको केही दिनपछि नै टुट्ने गर्छन् ।
धेरै यस्ता सम्बन्धहरु टुट्नाका कारणहरु विभिन्न कारण रहेका हुन्छन् । कतिले सम्बन्धलाई धेरै महत्व समेत दिने गर्दैनन् । आउनुहोस् सम्बन्ध टुट्नका मुख्य कारणहरु हेरौ
१. सामाजिक सञ्जालमा राखिने स्टाटस
सामाजिक सञ्जालमा रिलेशनसिपलाई लुकाउने काम गरिन्छ । यसका कारण पनि सम्बन्ध कमजोर हुने गर्छ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन सानो कुरामा पनि चुक्ने गर्छन् । प्राय धेरैले रिलेसनशिप सिंगल राख्ने कारण पनि सम्बन्धमा दरार आउने गर्छ ।
यस्तो व्यवहारले सम्बन्धमा असमझदारी पैदा हुने र ब्रेकअप हुने गर्छ ।
२. ज्यादा खर्च गर्ने बानी
यो कारण सबैभन्दा धेरै युवतीहरुमा लागु हुने गर्छ । धेरै युवतीहरु पैसा जोगाउने भन्दा पनि पैसा खर्च गर्न ललायित हुन्छन् । तर, केटाहरु यस्ता युवतीहरु खोज्छन् जो पैसा जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरुन् । यदी तपाई खर्चिलो स्वभावको हुनुहुन्छ भने ब्रेकअप हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
३. नाकमा औलाले कोट्याउने बानी
सफाइ गर्ने काम धेरैलाई मनपर्छ । तर, केही यस्ता बानीहरु हुन्छ् जो एकअर्का मन नपर्ने हुन्छ । केही केटा तथा केटीहरु नाक औलाले चलाएपछि हात धुनुभन्दा अरुलाई छुने गर्छन् जुन पार्टनरलाई मन नपर्न सक्छ । यस कारण पनि ब्रेकअप हुने गरेको छ ।
४. अल्छी हुनु
ब्रेकअप हुनुको एउटा कारण अल्छी हुनु पनि हो । यो कारण अजिब लाग्न सक्छ तर आफ्नो पार्टनर एक्टिभ भएको जो कोही हेर्न चाहान्छन् । अल्छी भएका कारण झट बोल्ने हुँदा ब्रेकअप हुने सम्भावना पनि उत्तिकै उच्च रहेको हुन्छ ।
५. अजीब तरिकाले खाना खानु
केहीको बानी च्याप–च्याप गरेर खाना खाने बानी हुन्छ । यस्तो आवाज निकालेर खाना खाने बानीलाई प्राय धेरैले रुचाउने गर्दैनन् । यसलाई खराब बानीको संज्ञा दिने गरिन्छ । जसको कारण सम्बन्धमा दुरी बढ्दै जान्छ । यसरी खाने बानीलाई पार्टनरले धेरै दिनसम्म झेलेर बस्न सक्दैनन् ।
६. साथीलाई व्यंग गर्नु
बोली रहँदा कति मानिस ख्याल नै नगरी विभिन्न गाली गलौच गर्ने काम गर्छन् । यसका कारण पार्टनरसँग पनि झगडा हुने सम्भावना बढी हुन्छ । गालीका शब्दहरु प्राय पार्टनरले सुन्न चाहादैनन् । अरुसँगको रिस आफुसँग पोख्ने बानीले पनि सम्बन्ध टुट्ने गर्छ ।
७. पब्लिक प्लेसमा पार्टनरको हात नसमात्नु
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर धेरैले यस कुराको ख्याल गरेर बसेका हुन्छन् । सार्वजनिक स्थलमा हात समात्न लजाउनु, एक्लै छोडेर अर्कैसँग गफ गरेर बस्नु ब्रेकअपका कारण हुन् । यसले पार्टनरको मनस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ र ब्रेकअप हुने सम्भावनालाई प्रोत्साहित गर्छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतको आम निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथ विजयी बोरिस जोनसनलाई बधाई दिएका छन् । जोनसन र उनको कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई गत बिहीबार भएको निर्वाचनमा भारी बहुमत